Sepoy ပုန်ကန် | အိန္ဒိယတွင် 1857 ခုနှစ်များ၏ပုန်ကန်
1857 ခုနှစ်မေလမှာတော့ sepoys ထဲမှာ ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ 's တပ်မတော်ကိုဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ထလေ၏။ အဆိုပါမငြိမ်သက်မှုမကြာမီမြောက်ဘက်နှင့်ဗဟိုကိုဖြတ်ပြီးသည်အခြားစစ်တပ်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အရပ်သားမြို့များမှပျံ့နှံ့ အိန္ဒိယ ။ ကကျော်ခဲ့အချိန်အားဖြင့်, လူများသည်ပင်သိန်းပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်သန်းပေါင်းများစွာအသတ်ခံခဲ့ရသည်။ အိန္ဒိယအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိသျှအိမ်မှာအစိုးရကတိုက်ရိုက်ကိုလိုနီထိန်းချုပ်မှုယူပြီးဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်း ဗြိတိန် Raj အိန္ဒိယတွင်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ ဂိုအင်ပါယာ အဆုံးသတ်နှင့်ဗြိတိန်မှာပြည်ပရောက်ထဲသို့နောက်ဆုံးမဂိုဧကရာဇ်ကိုစလှေတျ မြန်မာနိုင်ငံ ။
အကြောင်းကို 1857 ခုနှစ်၏အိန္ဒိယပုန်ကန်ကဘာလဲခဲ့သလား
၏ချက်ချင်းအကြောင်းမရှိ 1857 ခုနှစ်၏အိန္ဒိယပုန်ကန် ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏တပ်များအသုံးပြုတဲ့လက်နက်များအတွက်ထင်ရသောအသေးအဖှဲအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအမဲဆီစာရွက်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုထားတဲ့သစ်ကိုစံနမူနာ 1853 Enfield ရိုင်ဖယ်မှအဆင့်မြှင့်။ အဆိုပါကျည်တောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရိုင်ဖယ် load နိုင်ဖို့အတွက် sepoys စက္ကူသို့ကိုက်နှင့်၎င်းတို့၏သွားများနှင့်အတူကကိုက်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။
ကောလာဟလများအဆိုပါသည့်အရာတစ်ခုပေါ်တွင်အမဲဆီအမဲသား tallow နှင့်ဝက်သားဝက်ဆီအရောအနှောများကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကွောငျး 1856 ခုနှစ်တွင်စတင်; နွားတွေအစာစားခြင်း, သင်တန်း, ဖြစ်ပါတယ် ဟိန္ဒူဘာသာအတွက်တားမြစ်ထား ဝက်သားစားသုံးမှုကိုအစ္စလာမ်ဘာသာ၌တည်ရှိ၏စဉ်။ ထို့ကြောင့်ဒီတစ်ခုသေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဗြိတိသျှအလေးအနက်ထားဟိန္ဒူနှင့်မွတ်စလင်တပ်တွေနှစ်ဦးစလုံးမှားဖို့စီမံခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပုန်ကန်သစ်ကိုလက်နက်များလက်ခံရရှိရန်ပထမဦးဆုံးဧရိယာခဲ့သည့် Meerut အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှထုတ်လုပ်သူမကြာမီ sepoys တို့တွင်ပြန့်ပွားအမျက်ဒေါသငြိမ်းအေးဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်သည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲသွားပေမယ့်ဒီအပြောင်းအရွေ့အဖြစ်ကောင်းစွာ backfired - သူတို့သာ sepoys '' စိတ်ထဲမှာနွားမနှင့်ဝက်အဆီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလအတည်ပြုခဲ့သည်သည့်ကျည်တောင့်လူးခွငျးရပ်တန့်ဆိုတဲ့အချက်ကို။
မငြိမ်သက်မှု Spreading ၏အကြောင်းတရားများ:
ဟုတ်ပါတယ်, အိန္ဒိယပုန်ကန်ပျံ့နှံ့အဖြစ်ကအားလုံးကို Cast နှစ်ခုစလုံး sepoy တပ်ဖွဲ့များနှင့်အရပ်သားများအကြားမကျေနပ်မှုများထပ်တိုးအကြောင်းတရားများအပေါ်ကိုယူ။ Prince မိသားစုများကိုသူတို့ရာဇပလ္လင်အဘို့အအရည်အချင်းမပြည့်မှီမွေးစားကလေးများအောင်ကြောင့်အမွေမြေဥပဒေကဗြိတိန်အပြောင်းအလဲများကိုဖို့လူထုအုံကြွမှုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယမြေယာအသိမ်းခံရခြင်းနှင့်လယ်သမားကပြန်လည်ဝေငှပေးသည်ခဲ့စဉ်ကတည်းကမြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယတွင်အကြီးစားမြေယာကိုင်ဆောင်သူကိုလည်းထလေ၏။ တောင်သူလယ်သမားများ၏သော်လည်းဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှမလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ - သူတို့ကဗြိတိသျှတို့ကချမှတ်ထားမိုးသည်းထန်စွာမြေယာအခွန်ဆန္ဒပြရန်ဖို့ပုန်ကန်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဘာသာတရားကိုလည်းစိတ်ရင်း join ဖို့အချို့သောအင်ဒီးယန်းသတိပေးခံရ။ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအပါအဝင်အချို့သောဘာသာရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်အစဉ်အလာ, တားမွစျ sati အများအပြားဟိန္ဒူများ၏ဒေါသဖို့, ဒါမှမဟုတ်မုဆိုးမ-မီးလောင်ရာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းထိခိုက်စေရန်ကြိုးစားခဲ့ ဇာတ်စနစ်က Post-ဉာဏ်အလင်းကိုဗြိတိသျှပညာရှိမှမူလကပင်မမျှတသလိုပဲသော။ ထို့ပြင်ဗြိတိသျှအရာရှိများနှင့်သာသနာပြုဟိန္ဒူနှင့်မွတ်စလင် sepoys မှခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကိုဟောပြောစပြုလာသည်။ အိန္ဒိယဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာ ရှိ. အကြောင်း, အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်, ယုံကြည်ကြ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးမခွဲခြားဘဲလူတန်းစား၏, ဇာတ်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုနှင့်ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏အေးဂျင့်အားဖြင့် disrespected ခံစားရတယ်။ အလွဲသုံးစားလုပ်သို့မဟုတ်ပင်အသတ်ခံအင်ဒီးယန်းခဲစနစ်တကျအပြစ်ပေးခံခဲ့ရသောကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများ; သူတို့ကြိုးစားခဲ့ခဲ့ကြသည်ပင်လျှင်, သူတို့သည်ခဲပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်နှင့်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့နီးပါးအသတ်မရှိအယူခံနိုင်။
1857 ခုနှစ်၏အိန္ဒိယပုန်ကန်သြဂုတ်လမှာတော့ 1858. ၏ဇွန်လသည်အထိကြာမြင့်, 1858 အိန္ဒိယအက်ဥပဒေအစိုးရသည်ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်း။ ဗြိတိသျှအစိုးရကနေဆဲအခြားတစ်ဝက်၏အမည်ခံထိန်းချုပ်အမျိုးမျိုးသောမှူးမတ်နှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီအောက်မှာယခင်ကအိန္ဒိယ၏ထက်ဝက်၏တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ။ ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယား အိန္ဒိယ Empress ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးမဂိုဧကရာဇ်, ဗဟာဒူးရှားဇဖား (သူကအနည်းငယ်သာအခန်းကဏ္ဍကစားပေမယ့်), တော်လှန်ရေးအဘို့အအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှအစိုးရကရန်ကုန်, မြန်မာပြည်ပြည်ပရောက်သို့ကိုယျတျောကိုစေလွှတ်။ ,
အိန္ဒိယကြည်းတပ်ကိုလည်းပုန်ကန်ပြီးနောက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုကိုမြင်တော်မူ၏။ အထူးသဖြင့် warlike စဉ်းစားသူများလူမျိုး, ထိုကဲ့သို့သောဂေါ်ရခါးနှင့်ဆစ်ခ်အဖြစ် - အစားပန်ဂျပ်ကနေဘင်္ဂါလီတပ်ဖွဲ့များအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခို၏ဗြိတိသျှက "စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလူမျိုး" မှစစ်သားစုဆောင်းဖို့စတင်ခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, 1857 ခုနှစ်၏အိန္ဒိယပုန်ကန်အိန္ဒိယများအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျ, ဗြိတိန်နိုင်ငံက၎င်း၏အင်ပါယာ၏ "ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုရတနာ" ၏နူးညံထိန်းချုပ်မှုယူခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်။ ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံ (နှင့်မတိုင်မှီအခြားကိုးဆယ်အနှစ်ပါလိမ့်မယ် ပါကစ္စတန် ) သူတို့၏လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး Timeline ကို: တော်လှန်ရေး6အဆင့်
Ghazni ၏ Mahmud
ပြင်သစ်၏အစိုးရသောမင်းတို့: 840 မှစ. 2017 အချိန်အထိ
အဘယ်အရာကိုဂေါက်ရိုးတံ၏ 'ကျောရိုး' 'Is နှင့်ကိုသင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုသလား?
Willow မှစ. အက်စပရင် Make လုပ်နည်း
သငျသညျလကျတငျခရစ်ယာန် Band ဆာဗေးဒေါလိုပါလျှင်, သင်အဲဒီတီးဝုိင်းထဲက Check နေရမည်
ဂစ်တာ Solo Play မှလေ့လာပါ
Hung ကရောဂါ Kung Fu ၏သမိုင်းနှင့်စတိုင်လမ်းညွှန်
အဆိုပါ Element တွေကို၏ပရင့်ထုတ်ရန်အ Periodic ဇယား - valence စွပ်စွဲချက်
'' Beber '' ၏ conjugation
အဆိုပါ Yule Sabbat များအတွက်ပုဂံဆုတောင်း၏ 12 နေ့ရက်များ
အားလုံးအချိန်ရယ်စရာအကောင်းဆုံး Animated, Movies
ရုပ်ရှင်မရေိကပြောင်းလဲစေ 10 အဆောက်အဖော်ပြ
Bienvenu - အဖြစ်များသည့်ပြင်သစ်အမှား
Disc ဘရိတ်များအတွက်နောက်ဘရိတ် Pad တက်ဘလက်များသည်ပြောင်းလဲနည်း
ထိပ်တန်း 10 ဦးအနှေးဂီတအယ်လ်ဘမ်များ
အဘယ်အရာကိုမြင်းကီဒါဘီ Won ဖူးသလော